Isimemo solwazi sokunceda ukubalisa amabali amagorha alityelweyo e-WWI aseMzantsi Afrika – Grocott's Mail
You are at:Home»NEWS»Isimemo solwazi sokunceda ukubalisa amabali amagorha alityelweyo e-WWI aseMzantsi Afrika
Isimemo solwazi sokunceda ukubalisa amabali amagorha alityelweyo e-WWI aseMzantsi Afrika
By Staff Reporter July 1, 2020 Updated: July 10, 2020 No Comments15 Mins Read
Iphulo lesikeyile esikhulu liyaziswa kule veki, ukuqokelela iinkcukacha zamawaka abantu abamnyama baseMzantsi Afrika abalwa ngexa leMfazwe yokuQala yoMhlaba. Iphulo eli linethemba lokuqokelela izimvo zoluntu, ukunceda ukuvala iziqwenga ezingekhoyo zobomi bala madoda lawo kude kube ngoku angazange akufumane ukuqondwa ngokuzinikela kwawo ngamagama.
Ekuqhubeni kweMfazwe, amawaka abantu abamnyama baseMzantsi Afrika baye babhalisela imisebenzi ekungaliwayo kuyo kwiiyunithi ezahlukeneyo kuquka uMkhosi wezeMisebenzi wabeBala eKoloni, uThutho ngamaHashe oluNcedisayo eKoloni iZiko leMisebenzi yoMkhosi kunye neQela lamaJoni kwiMisebenzi yoMkhosi.
Ngokungafaniyo neSiqendu seMisebenzi seeNzaka zoMzantsi Afrika, esasiza kunceda eYurophu kwaye saziwa kakhulu ngokunxulumana kwaso ne-SS Mendi, la madoda afunwa kwaye asebenza kumhlaba waseAfrika.
I-Commonwealth War Graves Commission (CWGC), ngumbutho onika imbeko amadoda nabasetyhini abasi-1.7 sesigidi bomkhosi woManyano lweZizwe ezinobuDlelwane abasweleka kwiiMfazwe eyokuQala neyesiBini yoMhlaba, ichonge ngaphezulu kwamalungu ali-1 600 eeyunithi zemisebenzi zoMzantsi Afrika.
U-Liz Woodfield, uMlawuli woLwazi noNxibelelwano kwi-CWGC uthe ngaphezulu kwenkulungwane emva kokuphela kweMfazwe, ayingawo onko emagama abo saphululana nabo kwizikhundla zeeyunithi zemisebenzi arekhodweyo ukubakhumbula. “Sifuna ukukutshintsha oko, ukuze banikwe imbeko ngamagama kwaye amabali abo abaliswe.”
Ukuba ngaba elinye lala magama lelesihlobo sakho esisondeleyo okanye umntu obumazi kwindawo ohlala kuyo simema nawaphi na amalungu asaphilayo osapho okanye abahlobo ukuba beze ngaphambili. Ungafikelela mhlawumbi ngeimeyile: info@hwb.co.za okanye ngokuthumela umyalezo obhaliweyo ku-40720.
UMbutho wamaFa eSizwe we-Desmond and Leah Tutu uxhasa i-CWGC kule projekthi yokubakhumbula. I-CEO yoMbutho u-Piyushi Kotecha uthi, “Siyazi ukuba zikunye, ezi yunithi zemisebenzi zaba negalelo eliyimfuneko kumzamo wemfazwe waseBritani – hayi ngokuphatha izixhobo nje kuphela kodwa ngokuxhasa nokunceda abo babephambili kunye nokugcina imikhosi ebaleni.”
Previous ArticleThe Village Green Goes Virtual
Next Article Local economy in the spotlight